Daacish oo sheegatay masuuliyada dilka guddoomiyihii hore ee degmada Qandala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDaacish oo sheegatay masuuliyada dilka guddoomiyihii hore ee degmada Qandala
Guddoomiyihii hore ee Qanadala Jaamac Maxamed Khuurshe. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Daacish ayaa sheegatay masuuliyada dilka guddoomiyihii hore ee degmada Qandala, sida lagu sheegay qoraal ay daabacday wakaalada wararka Daacish ee Acmaaq maanta oo Khamiis ah.
Jaamac Maxamed Khuurshe, guddoomiyihii hore ee degmada Qandala, ayaa waxaa toogasho ku dilay niman baastoolado ku hubeysan gudaha magaalada Boosaaso fiidnimadii Talaadada, gacan ku dhiiglayaasha ayaa ka baxsaday goobta toogashada kadib, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Saraakiisha ammaanka Puntland ayaa goobta tagay daqiiqado kadib, balse ma jiraan cid la xiray ilaa iyo hadda.
Khuurshe ayaa ahaa guddoomiyihii Qandala markii ay Daacish oo sidoo kale loo yaqaan ISIS ay weerartay oo qabsatay degmo xeebeedka bishii Oktoobar ee sanadkii 2016, kahor inta aysan dib uga qabsan ciidamada Puntland bishii December ee isla sanadkaas.